Ka m si dee na Twitter na Snitter ... | Martech Zone
Dị ka m Tweet on Twitter na Ikwo, M na-agbalị Twoosh. Ugboro abụọ na Ikwo dị mfe n'ihi na Ikwo si Snook bia Kpoo.
Kedu ihe n'ụwa bụ lingo ọhụrụ a? Ebe a na-aga ihe ọ bụla… mgbe azụ m sonyeere Twitter. Twitter bụ ihu ọma ụlọ nkata ebe onye ọ bụla nwere ike ịgwa onye ọ bụla (enwere ụfọdụ atụmatụ nzuzo). Mgbe ị biputere okwu ma ọ bụ nzaghachi na Twitter, a maara ya dị ka Tweet. Na-eme ihe ọchị? Kpamkpam. Ekwela oge? Ikekwe. Na-eri ahụ? Eeh.
Fọdụ folks na-akpọ ya micro-ịde blọgụ; Agbanyeghị, ana m ahụ n'onwe ya dị ka mkparịta ụka ma ọ bụ oghere emeghe karịa blog ebe ọ bụ na ọ na-enwe mmekọrịta mmekọrịta n'etiti microblogger na ndị na-ege ntị. Otu blọọgụ na-enye isiokwu nke onye na-ede blọgụ nwere ike imepe mkparịta ụka na post zuru ezu nke na-abịa na ikike allow Twitter anaghị anabata ohere maka ikike ahụ, ọ na-emepe mkparịta ụka ahụ.
More banyere Twitter
Twitter na-enye gị ohere 'ịgbaso' ndị folks ahụ ị nwere ike inwe mmasị na ya. E nwere ụfọdụ nnukwu aha na ụlọ ọrụ ntanetị na-etinyekarị na Twitter. Offọdụ n’ime ha na-arịọ n’ezie ozi ma ọ bụ na-ezitere ha akụkọ ndị na-abịanụ. Anụrụ m n'ezie ozi ọma ahụ Heath ledger nwụrụ na Twitter - ọ bụghị na akụkọ ma ọ bụ na weebụ!
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịzaghachi mmadụ, ịnwere ike iji akara @ wee mee ihe. @onyedikachi_ pụtara na ị na-aza ma ọ bụ na-agwa m okwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwa m okwu ozugbo na naanị gị, ị nwere ike pịnye D douglaskarr.
Ka anyị gaa…
Kama ịga na nke m Peeji Twitter na-esochi nke onye ọ bụla, M na-ahu nagide a ọzọ ngwá ọrụ a na-akpọ Ikwo. Ọ bụ ndị dere Snitor Snook. Mgbe ịchọrọ Twitter na itinye njikọ na Tweet gị, ị nwere ike belata URL ahụ site na iji ya Kpoo, nke a na-ewu n'ime Snitter.
With ka na-anọnyere m?
Twitter nwere njedebe agwa 140 na nke ọ bụla na post gị. Gịnị kpatara mkpụrụ edemede 140? Amaghị nke ọma mana ekwenyere m na ọ na-adaba na njedebe njirimara 160 a hụrụ na ozi SMS (ozi ezitere na ekwentị gị). Twitter bụ mobile ike… ị nwere ike nweta ma nata tweet site na ekwentị mkpanaaka.
Ya mere, ihe heck bụ Twoosh?
Ọ bụrụ na biputere tweet nke bụ mkpụrụ edemede 140 ọbụlagodi, nke ahụ bụ Twoosh, tụnyere ndị Swoosh ụda nke basketball mgbe ọ na-amị mfe site na nkata. Ndị enyi m na Ọrụ Ntughari ewuwo, ihe enwere ike ịkọwa dị ka, egwuregwu kacha aba uru, adịghị mma, egwuregwu na-enweghị ntụpọ mana na-adịghị emerụ ahụ m hụtụrụla na ịntanetị, EBUKA 140.
Tweet140 na-egwu nke ọ bụla n'ime Tweets gị, akara gị ma bulie gị ike gị ịdị ka ihe odide 140 kwa Tweet dị ka o kwere mee. Ha ga na-ekpori ndụ ma na-akwa gị emo mgbe ị na-esi isi.
M wee pụọ ọbọgwụ ọnọdụ n'azụ, ma ugbu a nnweta. Tweet140 jidesiri ike na mkpụrụedemede 140, kwa, lee anya na ibe obibi na ozi niile dị na agwa agwa 140.
Enweghị m ike ikwere na a beenụrụ m na nke a!
Ya mere… gụọ ya otu oge ọzọ: Dịka m tweet on Twitter na Ikwo, M na-agbalị Twoosh. Ugboro abụọ na Ikwo dị mfe n'ihi na Ikwo si Snook bia Kpoo.
You nweta ya ugbu a?
Nwere olileanya ịhụ gị na Tweeting na Twitter na Snitter, n'oge na-adịghị anya! Nwere olileanya na ị ga-eme Ugboro abụọ na Tweet140!
Tags: uba 500ndabaraHannaIsaac Pellerinnnyocha nyochaatụmatụ offlineonline ahia azumNtanetị Ahịa N'ịntanetịonline atụmatụbiputere ka wordpresspost-usoro-ọkọlọtọAmụma Ahịanchịkọta saịtịahịa mmadụtelepresenceurunje virus
Mass Media na Mass Social Networks = NA-adaghị
Anaghị m eso ndị zuru ezu na Twitter (achọpụtara m banyere Heath Ledger na Digg, anaghị m eji nke ahụ eme ihe), mana agbakwunyela gị na ndepụta ugbu a Doug!
Nsị bụ nnukwu ngwaọrụ, m na-eji Nsị n'ụlọ na Tweetr (ngwa AIR ọzọ na-arụ ọrụ) na-arụ ọrụ na m na-amalite ihe banyere ịwụnye Snitter maka ọrụ. Enwere ọtụtụ esemokwu, mana Tweetr na-agụ ọnụọgụ ole ị hapụrụ nakwa dị ka mkpụmkpụ na-agba ume (mana enweghị m ike icheta ihe ọ bụla), nwere ike ịka mma maka egwuregwu gị!
Ọ dị mma, n'ihi doug, ana m atụzi tweet na twitter na ịkwa ụra nke snook, nke pụtara na ọ na-abịa na snurl, ee ee, nke a bụ twoosh
"Agaghị m ekwenye na a m adaba m na nke a!" - ditto.
Nnukwu Intro na ụwa nke Twitter. Echere m na ị kụrụ ntu ahụ n'isi… ọ na-adị ka ịkpa ọchị na-egbu oge ọtụtụ ụbọchị, mana site n'oge ruo n'oge ị ga-enweta ọtụtụ uru. Na ee, na-eri ahụ.
Na ekele maka nkwụnye Tweet140! (Ọ bụrụgodị na ị mere bump m off the leaderboard)
Akwa post Douglas. N'ezie na-edozi ihe n'ụzọ dị mma. Nabata ya - ị bụ onye Twaddict!
Jenụwarị 25, 2008 na 3:09 PM
Ekwere m ya! Twaddict… M hụrụ ya n'anya!
Jenụwarị 25, 2008 na 11:24 PM
Ee ọ na-eri ahụ, ana m ekwenye na m bụ onye Twaddict. Ma ọ bụkwa ebe dị mma iji nweta ozi (M mụtakwara banyere Heath Ledger site na Twitter, yana ọkụ na Las Vegas na akụkọ ndị ọzọ na-agbasa). I nwekwara ike twitter na folks na-ekere òkè (n'ezie ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta) na otu ihe omume. M soro usoro ụwa, NFL playoffs, na ntuli aka ndị isi na oge na ọtụtụ ndị ọzọ na twitterverse.
Enweghi ike ịkwado ya nke ọma.
Jenụwarị 31, 2008 na 10:05 PM
Larry Clarkin nwere ebe obibi obi ụtọ ebe ọ na-eme ụfọdụ okwu metụtara Twitter nke aka ya. Echere m na ọ bara uru ịkekọrịta.
Raúl C. (azịza)
Feb 17, 2008 n’elekere 9:26 nke abali
Nkechi otu m siri ghota ihe nile ikwuru na akpa okwu. Ọ pụtara na m bụ Ugbor?
Feb 17, 2008 na 12:40 PM
Ee, ị bụ! 🙂
BTW: Agbanyela m na Snitter Nke iri abụọ na atọ, o yiri ka ọ ga-akwụsi ike karị. Onweghi ike ikwusi oyi juru m anya.